कसको प्रतिक्षामा साम्राज्ञी ? – Mero Film
कसको प्रतिक्षामा साम्राज्ञी ?
प्रतिक्षा त के के हो के के ? कुरा अभिनेत्री साम्राज्ञीको गरौ । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह फिल्म तिम्रो मेरो साथको छायांकनमा जोडिएकी छिन् । फिल्म ९ महिनासम्म बन्द रह्यो । साम्राज्ञीले फिल्मको काम नगरेको त बर्ष दिन बढी भैसकेको हो भनेर भनौ ।
यसैले पनि मनमा उत्साह पनि छ, डर पनि छ । अब पनि फिल्म चलेन भने के होला भनेर डराउनुपर्ने होइन त । छ नी । फिल्म चल्न छाडेका छन् उनका । मनमा डर यही भएर त हुन्छ । साम्राज्ञीलाई हिट बक्स अफिसको प्रतिक्षा छ । उनको फिल्म चल्नपर्छ अब । चलेन भने उनलाई विश्वास गरेका निर्माता निराश हुनपर्छ भनेर भनौ ।
साम्राज्ञीको प्रतिक्षा भने अर्कै देखियो नी । उनी विन्दास मुडमा देखिइन् । घामको प्रतिक्षा गर्दै । जाडोमा घामको प्रतिक्षा भैहाल्छ । साम्राज्ञीको ब्रेकअप पनि भयो । उनी राम्रो काम दिन सुरमा छिन् । दर्शकलाई उनको राम्रो हिट फिल्मको प्रतिक्षा छ भनेर भनौ ।
२०७७ माघ ९ गते १०:३४ मा प्रकाशित